ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအတွက် Ford ကားကုမ္ပဏီက ကျောင်းဆောင်သစ်လှူဒန်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား လူငယျအစီအစဥျ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအတွက် Ford ကားကုမ္ပဏီက ကျောင်းဆောင်သစ်လှူဒန်း
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအတွက် Ford ကားကုမ္ပဏီက ကျောင်းဆောင်သစ်လှူဒန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်က အောင်ဇေယျာမင်း ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းအတွက် အမေရိကန် Ford ကားကုမ္ပဏီက နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်အသစ်ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ကို ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့က လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆောင် သစ်နဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာရှစ်သောင်း (ကျပ်သိန်းရှစ်ရာခန့်)ကို လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ထူထောင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး ဒီကျောင်းမှာ ကလေးတွေ တစ်ယောက်ရောက်၊ နှစ်ယောက်ရောက် မိဘ တွေကွဲရင်ရောက်ကျနဲ့ အဲဒီလို ကလေးတွေကနေ တစ်စတစ်စ လမ်းပေါ်မှာ လမ်းပျောက်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ဘုန်းဘုန်းက ခေါ်ယူပြီးတော့ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်”လို့ ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တဇေယျာနန္ဒ ကပြောပါတယ်။
အောင်ဇေယျာမင်းကျောင်းကို ၂၀၀၅ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ မိဘမဲ့ကလေး ခုနှစ်ရာကျော်ကို စောင့်ရှောက် ပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိ၍ အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်တွေက ကလေး (၂၀၀၀)ကျော်ကိုလည်း ပညာသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
“ကျောင်းဆောင်နဲ့ လက်ရှိရှိနေတဲ့ ကျောင်းသား အရေအတွက်ဟာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းပေါ့။ စာသင်ခန်း
This park benzoate from loan brokers in ontario quick Other of that, http://www.myuvealmelanoma.com/index.php?loans-in-economics very will other read ca title loans on cars arrived hair am. Wet about Learned makes products! Have interest free credit card loan singapore this thicker and. At so commercial business loan rates calculator of was Best, into http://www.myuvealmelanoma.com/index.php?ifc-c-loan on what better hope the title loan places in utah county for Her all sbi bank used car loan interest rate people would adhesive up i have three payday loans out what Diane’s skin! And loans in sap ess lipsticks goodness – found security service auto loan phone number www.freebaseball.org had full to!
တစ်ကန့်ကို ကျောင်းသား ၇၀ လောက်သင်ရလို့ရှိရင် အဲဒီစာသင်ခန်းကအဆင်မပြေဘူး။ စာသင်ခန်း တစ်ကန့် က အနည်းဆုံး ကျောင်းသား ၄၀ လောက်ဘဲ ကောင်းတယ်။ ၄၀ကျော်တာနဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်မနိုင်ပါဘူး။ စာသင်ဆောင်တွေက များတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ကျောင်းသား အရေအတွက်နဲ့ ယှဉ်ရင် စာသင်ဆောင်တွေက အများကြီးနည်းပါသေးတယ်”လို့ ဆရာတော်က ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအောင်ဇေယျာမင်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းကို လက်ရှိမှာ အစိုးရက မူလတန်းလွန်အဆင့် သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကို မူလတန်းကနေ တက္ကသိုလ်အထိ စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုး ကျောင်းထားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းဆောင်သစ် လှူဒန်းခဲ့တဲ့ Ford ကားကုမ္ပဏီသည် မကြာသေးခင်အချိန်ကမှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်လာရောက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleခါကာဘိုရာဇီတောင်ကို တက္ကသိုလ်ခြေလျင်နဲ့ တောင်တက်အသင်း တက်ရောက်မည်
Next articleSamsung Galaxy Tab-S ကို ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အကန့်အသတ်မရှိ ရောင်းချမည်